Rooba baranaan walqabatee ofeeggannoo omisharratti taasifamuu qabu
Rakkoon jijjiirama haala qilleensaa rakkoo addunyaa ta’us Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as daran hammaataa dhufeera. Rooba cimaa baatii Hagayyaa eegalee roobaa jiruun bakka tokko tokkotti lubbuu namaafi qabeenyaarra badiin ga’eera. Naannoo rakkoo kanaaf saaxilaman keessaa Oromiyaan ishee duraati. Naannoo kanatti barana lafa hektaara miliyoona ja’a ol omishuuf karoorfamee hanga ammaatti lafti hektaara miliyoona shanii ol hojiirra ooleera. Kan hafe ammoo birraa kana kan sanyiin aguugamu ta’a.
Walumaagalatti callaa kuntaala miliyoona 186 ol walitti qabuuf yaadameera. Haala rooba yeroo ammaafi omisha qonnaa baranaa ilaalchisee yaada ogeessota Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa argannee akka armaan gadiitti dhiyeessina.
Obbo Indaalkaachoo Tafarii hogganaa ittaanaa biirichaafi hogganaa damee wabii nyaataafi carraa hojii uumuuti. Akka isaan jedhanitti, rooba baatii Hagayyaa as roobaa jiruun naannoo tokko tokkotti hubaatiin dhaqqabus kan garmalee guutuu laga Awaashiin walqabatee uumame garuu olaanaadha. Haaluma kanaan godinaaleen shaniifi gandoota 16 keessatti omishni hektaara kuma 13 ol ta’u guutummaatti wayita manca’u qe’eerraa buqqa’uu abbootii warraa kuma 12 oliif sababa ta’eera. Haa ta’u malee, namoota kanaaf sanyiiwwan midhaanii yeroo gabaabaa keessatti ga’uu danda’an kuntaala kuma 12 ol raabsuun lafa omishni irraa manca’errra akka facaafamu ta’eera. Tumsa cimaa taasifameenis lubbuu hedduu baraaruun danda’ameera.
Akka Obbo Indaalkaachoon ibsanitti, lagni Awaasha ammayyuu xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Kunis lagni kun kan miidhaa dhaqqabsiisu waggaa waggaan osoo hintaanee waggaa shan keessatti si’a tokko waan ta’eef sababa kanaa gad fageenyaan qorachuuf itti adeemaa jiraachuu himu. Gaaga’amni rooba barana taatee laga Awaash qofa akka hintaane eeranii, Jimmatti lagni Hawweetuu guutuun qabeenya qarshii miliyoonatti tilmaamamu mancaaseera jedhu.
Akkasumas, Iluu Abbaa Booraatti sigigni lafaa rooba cimaan uumame lubbuu namoota sagalii galaafachuusaafi ammas taanaan lageen gurguddoon walqabatee godinaaleen Wallagga arfan, Bunnoo Beddelleefi Jimmaa of eeggannoo cimaa taasisuu akka qaban dubbatu.
Haaluma walfakkaatuun biirochatti ogeessi olaanaan misooma midhaanii Obbo Bayyanaa Maammoo gamasaaniin akka ibsanitti baatiilee Waxabajjiifi Adoolessaa roobni bakka tokko tokkotti keessumattuu lafa gammoojjiitti baay’ee xiqqaa kan ture ta’us, baatii Hagayyaa as roobni cimaan roobaa jiru omisharratti dhiibbaa uumaa jira jedhu.
Kunis lafa ciisaa ta’erratti timaafi lolaan kuufameen midhaan ooyiruurra jiru tortorsuusaafi bakka olkaa’iinsa qaburraa ammoo sanyii lagatti haruusaa ibsu. Haa ta’u malee, hojii hubannoo uumuu karaa garaagaraa taasifameen qonnaan bulaan bo’oo baasuun miidhaa kana xiqqeessun danda’amusaafi roobni akkuma cimetti kan turu yoo ta’e midhaan biilaa kanneen akka garbuu, qamadii, aajjaafaa akkasumas xaafiifi boqqolloo mancaasuu waan danda’uu of eeggannoon taasifamuu akka qabu hubachiisu.
Kana malees, Ejensiin Metirolojii Biyyaalessaa ibsasaa tibbanaa keessatti hanga Garbi Paasifik deebi’ee ho’utti roobni waan itti fufuuf omisha qonnaarratti of eeggannoo cimaan akka taasifamu akeekkachiiseera.
Torban kana/This_Week 33756
Guyyaa mara/All_Days 1625551